ရခိုင်ပြည်အကြောင်းသိကောင်းစရာ | Your Blog Description
Microsoft Office ဆိုင်ရာ
Window Activate ဆိုင်ရာ
Posted by arakan new Posted on 21:47 with No comments
ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေပါစေ ၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဆောဝဲကို install ပြီးတာ နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ You ID နှင့် Password ပြနေလိမ့်မည်။ မိမိပေးဝင်ချင်သည့် သူငယ်ချင်းကို ကိုယ်ရဲ့ID နှင့် Password ပေးလိုက်ရင် ကို့ကွန်ပြူတာ ကို သူငယ်ချင်းက ၀င်ပြင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remote control of computers over the Internet, Instantly take control overacomputer anywhere on the Internet, even through firewalls. No installation required, just use it fast and secure. Training, sales and teamwork, TeamViewer can also be used to present your desktop toapartner on the Internet. Show and share your software, PowerPoint presentations etc. File transfer, chat and more, Share your files, chat, switch the direction duringateamwork session, andalot more is included in TeamViewer.
Download setup: TeamViewer 9.0.24322 | 5.7 MB (Free for personal use)
Download: Portable TeamViewer | 10.9 MB
View: Home page | Changelog
FB ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးများခင်ဗျား အေးကျော်(နည်းပညာ) ဆိုက်မှာ ဖုန်းဆော့ဝဲ ဂိမ်းများ သတင်းစသော အသစ်ကလေးများကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ တင်ပေးနေတာမို့ FB Page လေးကို LIKE ပေးပြီး အားပေးနိုင်ပါတယ်။(အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
5နှစ်စာလိုင်စင်နဲ့ Avira Internet Security Suite 2015 + 2020 License
Posted by arakan new Posted on 21:44 with No comments
Avira Internet Security Suite 2015 အသစ်ထွက်လာလို့ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးမှာ Antivirus ဆိုတာက မရှိမဖြစ်ထည့်သွင်းထားဖို့လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ Avria ကတော့ ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ Antivirus တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။ Antivirus ထဲ မှာ Avria ကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝကို Recommend ပေးတယ်ဗျာ။ Virus တွေကိုတော့ အတော်လေးကို ရှင်းတဲ့ကောင်ဗျာ။ Trojan , Worms , Malware , Spyware , Autorun , စတာတွေအပြင် အခြားသော Viurs အတော်များများကို သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာ အတွင်း မှ Virus များကိုသာမက Network ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ရင်လည်း Network ထဲမှာရှိနေတဲ့ Antivirus များကို လည်း ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ License အတွက်ကတော့ မပူပါနဲ့ 2020 အထိ 5နှစ်စာလိုင်စင် ပါပြီးသားပါဗျာ။ စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါ တယ်ဗျာ။
Avira Internet Security Suite 2015 final release - A very high-performing Anti-Virus tool that combinesacomplete set of tools and enriched with security improvements to protect user's home computer and business network PCs against suspicious threats and virus infections in all its kinds. This ideal application includes an anti-virus for local disk protection,arobust Firewall to protect incoming/out-coming connections and controls applications gestures, an Anti-Spyware,aPhishing-Scam protection against hackers and Scammers, Anti-Rippers, Email protections as well as it provides protection for online Internet activities. This makes Avira Internet Security 2015areliable all-in-one protection suite with modern security innovations.
--->Avira Internet Security Suite 2015 Features<---
As it name suggests, Avira Internet Security Suite 2015 providesapowerful permanent security is at your disposal to meet your needs. Unlike Avira AntiVirus 2015, this one emphasizes on protecting the users online activities, ensure safe navigation, protects all browsers including IE, FireFox, Chrome and Opera. It prevents malicious connections from reaching your personal information, blocks unauthorized access to user's profiles and data such as (Credit Cards, Bank Accounts, Billing Address, Payment Accounts), recognizes and blocks fake products selling websites, blocks suspicious online transactions and so much more.
Additionally, Avira Internet Security Suite 2015 has come withanew feature called "ProActiv" to protect hard drives including files, folder, partitions and all directories from getting infected. The ProActiv feature intelligently analyzes the behavior ofacomputer and detects threats. Of course, you always have the ability to delete, move or quarantine virus infected files. Avira Internet Security Suite 2015 also offers an aside optimization tool to repair operating systems for better performance.
Avira Internet Security Suite 2015 free download is compatible with Windows7(32-64 bit), Windows 8/8.1 (32-64 bit), Windows Vista (x86-x64), Windows XP (32-64 bit).
--->How to Install Avira Internet Security Suite 2015<---
Step 1- Avira Internet Security Suite 2015 consists of two applications which must be both installed.
Step 2- Install the program - Double click on "avira_antivirus_pro_en.exe" and "avira_speedup_internetsecuritysuite.exe".
Open "Avira Internet Security Till 17.9.2020.key" and merge to system.
Step 3- Enjoy Avira Internet Security Suite 2015 Full Version.
Trial Version 2020 - License
Labels: Antivirus ဆိုင်ရာ
Internet & Computer ရဲ့ Speed ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လာစေမယ့် - Auslogics BoostSpeed Premium v7.8.0.0 + KeyMaker
Posted by arakan new Posted on 21:40 with No comments
Auslogics BoostSpeed ဆိုတဲ့ စွယ်စုံသုံး Maintenance Tool ကိုတော့ တော်တော်များများ ရင်းနှီး ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာအတွက် အသုံးတည့်စေမယ့် Tools ပေါင်း 13မျိုးအထက် ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကွန်ပြုတာနဲ့ အင်တာနက်ကိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်ဖို့ အစွမ်းထက်တဲ့ optimizer ဆော့လ်ဝဲဖြစ် ပါတယ်၊ ကွန်ပြုတာကို သန့်ရှင်းပေးပြီး မြန်ဆန်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ Startup မြန်ဆန်ခြင်း ၊ အင်တာ နက်မြန်နှုန်းမြှင့်ပေးခြင်း၊ Internet Explorer, Firefox တို့မှာမလိုအပ် တဲ့ဖိုင်များကိုလည်းရှင်းလင်းပေးဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။Registry နှင့် Disks ကမလိုအပ်တဲ့ junk files တွေကိုလည်းရှင်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ Disk Defrag , Internet Optimizer , Tweak Manager , Duplicate File Finder , File Shredder , Disk Wiper , Startup Manager , Uninstall Manager , Service Manager , Task Manager , System Information , Rescue Center , Browser Manager စတဲ့ Tools တွေပါဝင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးပြီးသားကတော့ အပေါ်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ Feature တွေကိုသိနိုင် ပါတယ်။ မသိသေးသူများအတွက်လည်း Tools တစ်ခုချင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသေး စိတ်ကိုရှင်းပြပေး ထားပါတယ်ဗျာ။ ဒီဆော့လ်ဝဲကို Windows XP / Vista /7 / 8 တင်ထားတဲစက်မှာအ သုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Labels: PC-Speed Up
အရိုးရှင်းဆုံး Windows7တင်နည်း
Posted by arakan new Posted on 21:39 with No comments
ဒီနေ့တော့ Windows7တင်နည်းကို အားလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Windows တစ်ခုကို စတင်ပြီး Install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ Windows7ကိုတင်ယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်
Requirement ခေါ်တဲ့ အချက်အလက်နဲ့ ပြည့်စုံပါမှ Windows ကိုအဆင်ပြေပြေ တင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Windows7ကိုတင်ဖိုရန် လိုအပ်ချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
စာကိုမြင်တာနဲ့သဘောပေါက်လောက်မှာပါ၊ တကယ်လို့မိမိကွန်ပျူတာက အထက်ပါ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ Windows7တစ်ခုကို အရိုးရှင်းဆုံးနည်းကို အောက်မှာ ဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Windows တစ်ခုကို Install စတင်လုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်မှာ ၀င်းဒိုးအခွေ DVD တစ်ချပ်တော့ လိုအပ်ပါမယ်။ အားလုံးအသင့်ဖြစ်ရင်တော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Power ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါ။
Delete Key ကိုနှိပ်ထားပါ၊ အချို့သော ကွန်ပျူတာတို့တွင် F2 Key ကိုနှိပ်ပေးထားပါ။ သေချာစေရန် CMOS Setup ပေါ်လာသည်အထိ လေး ငါးခါ လောက် ဆက်တိုက်နှိပ်ထားပေးပါ။
Windows7DVD အခွေကိုထည့်လိုက်ပါ။
Advanced BIOS Features ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ အနီရောင်နဲ့ဝိုင်းပြထားပါတယ်။
First Boot Device OR Boot sequence ဆိုတာကို ရှာပြီး
First Boot နေရာမှာ CDROM ထားပါ။ Second Boot နေရာမှာ Harddisk OR HDD-0 ကိုထားပါ။
ပြီးလျှင် F10 Key ကိုနှိပ်၊ Yes OR Enter Key ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
စက်က Restart ကျသလို ကျသွားပါလိမ့်မယ် စောင့်နေပါ၊ စက်ပြန်တက်လာတဲ့အခါ၊
Press any key to boot from DC or DVD……
ဆိုပြီးစာကြောင်းအဖြူရောင်လေးနဲ့ပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ Enter Key ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Windows Files များကို ကူးယူနေတုန်းလေး ခေတ္တစောင့်နေလိုက်ပါ။
Starting Windows ဆိုပြီးအောက်ကပုံအတိုင်းမြင်နေရရင်တော့ ခနလေးစောင့်နေလိုက်ပါ
Install Windows ဆိုပြီးပေါ်လာတဲ့အခါ ဘာမှထပ်ရွေးပေးစရာမလိုတော့ပါ Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ Install Now ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Setup is starting ဆိုပြီး အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာခဲ့ရင်တော့
မိနစ်အနည်းနယ်ကြာပြီးလို့ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ Operating System OS ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကတော့ ကျနော့် Windwos DVD ခွေက All in One အမျိုးအစားဖြစ်နေလို့ Operating System များနေတာပါ။ မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ Windows Operating System ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အခုကျနော်ကတော့ Windows7Ultimate x86 ကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်နေရရင်တော့ I accept the license terms ဆိုတဲ့
လေးထောင့်ကွက်လေးကို အမှန်ခြစ်လေးပေးပါ၊ ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Windows အသစ်တင်ယူမှာဖြစ်လို့ Custom (Advanced) ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Custom (Advanced) ရွေးပြီးလို့ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ တကယ်လို့ သင့်ကွန်ပျူတာမှာ
Partation တွေများနေခဲ့ရင်တော့ မိမိ Windwos တင်လို့ Harddisk Partation ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်မှာတော့ Partation တစ်ခုတည်းပဲ ဖြစ်နေလို့ Next ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ၀င်ဒိုးကအရင်သုံးလက်စ အဟောင်းရှိနေသေးတာတို့ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Windows အဟောင်းကို Format ချလိုတာတို့ Delete လုပ်လိုတာတို့ဆိုရင်တော့ Drive Option (Advanced) ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး Format ချယူနိုင်ပါတယ်။
Windows Files များကို Install ပြုလုပ်နေတုန်း ခနစောင့်နေပါ၊ Copying Windows files ကနေ Completing installation အထိ %0 to %100 အထိစောင့်နေရပါမယ် ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုပါ။
Windows dialogue box ကျလာပြီးရင်တော့ User name နေရာမှာ မိမိနာမည်ကိုထည့်ပါ၊
Computer name နေရာမှာတော့ မိမိကွန်ပျူတာကို ထားလိုသောနာမည်တစ်ခုခုကို
ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Password ထားပြီးအသုံးပြုလိုက ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း Password နေရာမှာ မိမိထားလိုသော Password ကိုထားပေးပါ၊ ဥပမာ-Zunite (CEO) စသည်ပေါ့၊ စာလုံးအကြီးအသေးအကုန်ရပါတယ်။
Retype your password ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း စောနားက Password နေရာမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့ Password ကိုထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ Type password hint (required) နေရာမှာတော့ အပေါ်က မိမိထားခဲ့တဲ့ Password မတူတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် စာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးပြီးလည်းအဲဒီ Hint password ကိုအသေချာမှတ်ထားပေးလိုက်ပါ။ တယ်ကယ်လို့ မိမိက password ကိုမေ့လို့ ဖွင့်မရတော့တဲ့အခါ စောနားက hint လုပ်ထားတဲ့ Password ကိုပြန်ထည့်ပေးနိုင်ရင် ကွန်ပျူတာ Lock ကိုကောင်းကောင်း ဖြေယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
ထည့်ပြီး အသုံးမပြုလိုသေးဘူးဆိုရင်လည်း Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
License agreement ဖြင့်ဝယ်ထားသော Windows မဟုတ်လျှင်တော့ Product Key ကိုမထည့်ပဲ automatically activate Windows when I’m online မှာရှိတဲ့ လေးထောာင့်ကွက်လေးမှ အမှန်ခြစ်လေးကိုဖြုတ်ပေးပြီး Next ကိုသာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Ask me later ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Time zone ရွေးခိုင်းတဲ့နေရာမှာတော့ မိမိနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ Provide ကိုရွေးလိုက်ပါ။
Windows ကို Install လုပ်နေတုန်း သင့်မှာ Internet Connection သာအသင့်ရှိနေပြီး တစ်ခါတည်း Connected လုပ်ပြီး Install လုပ်ယူသွားချင်တယ်ဆိုရင် Wifi ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ကုတ်နံပါတ်ကိုထည့်ပေးပြီး မိမိအသုံးပြုမယ့် Network အမျိုးအစားကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Router အမျိုးအစားသုံးတဲ့ သူတွေအထူးသဖြင့် 10 User Or Group User အနေဖြင့်အသုံးပြုနေကြတဲ့ သူတွေကတော့ အပေါ်ဆုံး Home Network ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးလို့ Windows is finalizing your setting ဆိုပြီး အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်နေရင်တော့ ခနစောင့်နေလိုက်ပါ ကွန်ပျူတာရဲ့ Desktop Screen ကြီးပေါ်လာသည်အထိစောင့်နေလိုက်ပါ။
Congratulations ပေါ့ဗျာ အပေါ်ကအဆင့်တွေကို အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့
Windows7Ultimate တင်ခြင်းကိစ္စ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီ။
PDF စာအုပ် အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေကတော့
Windows 8 တင်နည်းကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ
အရိုးရှင်းဆုံး Windows 8 တင်နည်း (မြန်မာလို စာအုပ်)
Windows 10 တင်နည်းကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ
Windows 10 Technical Preview Pro Edition & Enterprise Edition ဗားရှင်းအားလုံးကို အလွယ်တကူ Windows တင်နည်း
Labels: Windows တင်နည်းများ
Windows Tools ပေါင်းများစွာကို ဆော့ဝဲတစ်ခုတည်းနဲ့ ကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့-Your Uninstaller! Pro v7.5 2014 Multilingual Full + Key
Posted by arakan new Posted on 21:37 with No comments
Your Uninstaller! Pro v7.5 2014 Multilingual Full + Key
အားလုံးလည်း အသုံးပြု ရအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Your Uninstaller ဆိုတာလေးကတော့ သိတဲ့သူလဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ
ကွန်ပြူတာမှ အသုံးမပြုတော့တဲ့ Software တွေကို
Uninstall လုပ်ပေးတဲ့ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Software များကို uninstall ပြုလုပ်လို့ရတဲ့အပြင် Startup Manager, Disk Cleaner,
Start Menu, Trace Eraser, File Shredder များရော့ Windows Tools ပေါင်းများစွာကို
ဒီ Software တစ်ခုထဲနဲ့ ကိစ္စပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Software uninstall များလုပ်ရာတွင်လဲ မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းအသုံးပြု လို့ရအောင်လို့ Zip ဖိုင်ထဲမှာ Serial Key ကိုတစ်ပါတည်း
ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အသုံးလိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေကတော့
၁။ ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ Zip ဖိုင်ကို Right Click တစ်ချက်ထောက်ပြီး
Exrtarct files ဖြင့် ဖြေလိုက်ပါ။
၂။ your-uninstaller-setup7.exe ဖိုင်ကို Right Click တစ်ချက်ထောက်ပြီး
Run as administer ဖြင့် အင်စတောလုပ်ပါ။
ပြီးရင် Next တွေကိုနှိပ်ပေးပြီး Finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၃။ Serial Key ဖိုင်ထဲမှ User name & Serial Key ကို Copy ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
၄။ Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
Labels: PC- Uninstaller
Downlaod Winamp 5.66 Final Pro
Posted by arakan new Posted on 21:34 with No comments
Winamp playerဆိုရင်လူတိုင်းပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြပါပြီ ဒီနေ့တော့ Winamp Pro Player လေးကိုတွေ့လို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော့်စမ်းကြည့်ပြီးသွားပြီအားလုံးအဆင်ပြေတယ် ဖူးဘားရှင်းအတွက်လည်းအထဲမှာကီးဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ ကဲသူငယ်ချင်းတို့ဒီပလေယာလေးကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါင်းမှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Labels: PC- Player
Uniblue Driverscanner 2014 Full Version
Posted by arakan new Posted on 16:53 with No comments
Uniblue Driverscanner နာမည်ကြီးပေါ့နော် လေးကမိမိတို့ ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်နေတဲ့ driver တွေကို ကလစ်တစ်ချက်တည်းနိပ်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ကွန်ပျူတာအခုမှစသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော services သမားတွေပါဆောင်ထားသင့် ပါတယ်။ပြီးတော့system restor
point တွေကိုလည်းအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးပြီးပျောက်ပျက်နေတဲ့driver တွေကိုလည်းပြန်လည်ရယူပေးပါတယ်။သူ့ ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့Windows7 တွေမှာအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ
Old drivers may causearange of problems, from diminished hardware functionality to conflicts and system crashes. Although drivers are available for free and can be updated manually, identifying outdated drivers can takealong time. Moreover, pinpointing just the right driver from the manufacturer’s website, downloading and installing it can be laborious and technically risky.
Driver Genius Professional 14 Full Version Free Download
The key hasalimited number of activations,so activate your copy quickly. If the key doesn't work then comment so,We’ll bringafix soon
If you have used any cracks or patches,uninstall DriverScanner and installafresh copy of it.
Insert the serial key given , while connected to internet.
Click Activate,that’s it.
See Screen Shot For Full Version Proof.
Posted by koaye kyaw
(၁) ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း(၁) (၂) ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း(၂) (၃) ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း(ဒုတိယတ...
မြန်မာ စကားပုံများ (က မှ အ ထိ)
က ၁. “ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုး” ၂. “ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ” ၃. “ကိုယ်ကကျူး ကိုယ့်ဒူးတောင်မယုံရ” ၄. “ကိုယ်ထင် ကုတင်ရွှေနန်း” ၅. “က...
ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ ညောင်ပင်ဈေးရွာ အနီး အဖ ဦးကောင်းစံရွှီ၊ အမိ ဒေါ်အောင်ကြွဇံတို့မှ ၁၉၁၇ ခု၊ ...
Facebook Fan Page လုပ်နည်း
သယ်ရင်းတို့ရဲ့.. blog website လေးကို..လူများများလာအောင်.. popular ဖြစ်အောင်... active ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရင်တော့... Facebook ကိုအားကိုးရမှ...
((( ရခိုင် မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး ကျမ်း ပြုစုရေးသားသူ ဦးထွန်းရွှေခိုင် ( မဟာဝိ ဇ္ဇာ ) ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း ။ )))
ရခိုင် မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး ကျမ်း ပြုစုသူ ဦးထွန်းရွှေခိုင် ( မဟာဝိဇ္ဇာ ) ကို ရခိုင်ပြည်န...
koaye kyaw No comments ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာ ကိန်းဝပ်စံပ္ပါယ်နေတဲ့ မဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ပုံတော်ပါ ...
ဦးဥတ္တမလို ပုဂ္ဂိုလ်ကား ဖြစ်ရလိုပါ၏။ သို့သော် ဦးဥတ္တမလို ခေါင်းဆောင်ကား ဘ၀အဆက်ဆက် မဖြစ်ရပါလို။ သင်္ခါရ စက်ကွ...
အရောင် အပေါ်ပိုင်းအဖြူရောင်သည် ရခိုင်အမျိုးသားတို့၏ ဖြူစင်သောစိတ်ဓါတ်ရှိခြင်း၊ အမျိုးသီ လနှင့်ဌာနကို စောင့်ထိန်းခြင်း၊ ဖြူစင...
မဟာမြတ်မုနိသိမ်တော်အား အဝေးမှ မြင်ရပုံ မဟာမြတ်မုနိသိမ်တော် မဟာမြတ်မုနိ သားဆုတောင်းညောင်ပင် မဟာမြတ်မုနိသိမ်တော...
နှစ်ဆယ်ရာစု အတွင်း မြန်မာ အမျိုးသမီးများ၏ ထူးချွန် ထက်မြမှုကို ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပညာရည်ဖြင့် ထင် ရှားစေခဲ့သူ တဦးမှာ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါ်...
Copyright © 2013. ရခိုင်ပြည်အကြောင်းသိကောင်းစရာ - All Rights Reserved